Biography nke Charles Lyell, Onye guzobere Nna nke Geology nke Oge a | Netwọk Mgbasa Ozi
Na geology enwere otutu ndi oka mmuta nke megoro ihe di egwu, si otua na enyere aka iga n’ihu na imuta ihe banyere mbara ala anyi. N'etiti ndị ọkà mmụta sayensị a ma ama anyị nwere Charles Lyell. Ọ bụ ọkà mmụta banyere ala nke onye na-ahụ maka ịtọ ntọala ụwa nke oge a ma mee nchọpụta dị ukwuu nke nyere aka mụbaa ihe ọmụma banyere otú ụwa anyị si arụ ọrụ. Ọ bụ otu n'ime ndị nnọchi anya ama ama ama na mmechi nke ala.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka akụkọ ndụ Charles Lyell, na-akọghasị akụkụ kachasị mkpa nke ndụ ya na ihe egwu o mere iji mee ka mmụta ala dị elu n’oge ya.
1 Mmalite nke Charles Lyell
2 Omume, ịdị n'otu na nguzozi siri ike
3 Mmalite nke ndu na mkpali
4 Ebube na njem nke Charles Lyell
Mmalite nke Charles Lyell
Ọ bụ banyere nwoke a mụrụ na Kinnordy, Scotland na Nọvemba 14, 1797. Ọ mụtara iwu na Mahadum Oxford, mana ọ raara ndụ ya na geology. Dịka ị pụrụ ịhụ, ihe ga - enyere gị aka ito eto ma tobe dị ka mmadụ abụghị ihe ị na - amụ, kama ọ bụ ihe masịrị gị. Site na itinye onwe ya na geology n'ihi oke ochicho, o nwere ike nweta otutu ihe nke emeghi na njikere. N'ime ha, o nwere ike ibipụta na 1833 Principles of Geology. O were ọtụtụ mpịakọta iji chịkọta ihe ọmụma niile dị n'ime ya.
Azụwo Lyell na ndabere nke ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ nke oge a na edemede ya bụ yuniforiti N'ime ya ọ gbachiteere na ejirila nwayọ wee kpụọ ụwa ka ọ bụrụ ihe omimi dị iche iche dịka ndị anyị maara taa dịka ihe omumu banyere ala. O bu maka ala oma jijiji ugwu mgbawa, idei mmiri, na-aga n'ihu na mbuze, wdg
N’afọ ndị a, e nwere echiche ọzọ gbasasiri ike banyere nguzobe nke uwa bu ihe ojoo. Echiche a gbachitere na e wuru ụwa ma wụọ ya site n'ọtụtụ ọdachi dakwasịrị na obere oge, mana nke ahụ agbanweela ike ụwa niile na enyemaka.
Ha bụ echiche abụọ dị iche iche ma na-atụ aro tiori na-agbagha na ihe niile guzobere n'oge a bụ ihe dị egwu. Ọ bụrụ na ọ bụghị, gwa Giordano Bruno. Agbanyeghị, na mbipụta ya Principles of Geology, ọtụtụ akụkụ kọwara akwụkwọ edemede ya.
Omume, ịdị n'otu na nguzozi siri ike
A kọwara akụkụ dị iche iche nke edemede ahụ n'ụkpụrụ nke Geology. Otu n'ime akụkụ ndị a ka a kpọrọ n'ezie. Nke a bụ nkọwa Lyell kọwara ihe ndi gara aga site na ihe ndi ozo nke na aru oru taa. Nke ahụ bụ, ndị na-arụ ọrụ ala dịka ikuku mbuze, nke na-enyere aka ibubata nsị ma na-eme ihe mgbe niile, enweela ike ịgbanwe enyemaka ahụ kemgbe ọtụtụ puku afọ site na iji oge na nwayọ ọrụ.
Ọ gbachitekwara na ihe omimi ụwa niile bụ otu ma na-eme nwayọ nwayọ, ewezuga ụfọdụ ọdachi. A maara nke a dị ka ịdị n'otu. Ọdachi ndị ahụ zoro aka na ala ọma jijiji na ugwu mgbawa nke mere na obere oge dị mkpirikpi ma kpata mbibi nke ọdịdị ala nke ala.
N'ikpeazụ, ọ na-agbachitere na akụkọ ihe mere eme nke ụwa nyere site na okirikiri mgbe nile nke etinyere ihe ma bibie ya. A na-akpọ nke a ihe ike dị egwu. Ozizi a nke oke nhazi bụ ihe dị mkpa iji nwee ike itinye n'ọrụ usoro ihe omimi niile dị ka mbuze na sedimentation, ihe niile mgbawa na seismic. Nkwupụta ndị o mepụtara sitere na nyocha ihu ala ụfọdụ ọ mere n'oge ogologo njem ọ malitere na Europe na North America.
Mmalite nke ndu na mkpali
Charles Lyell tụkwara ụfọdụ echiche banyere mmalite nke ndụ na ụwa anyị. O chere na ọ dịla ogologo oge na-aga n'ihu nke mkpochapụ na okike nke ụdị. Ihe okike a na mbibi nke ụdị a bụ n'ihi mmegharị nke kọntinent nwere na nke butere nnukwu mgbanwe na ihu igwe nke metụtara nlanarị nke ụdị a. Nke a mere n'eziokwu na ụdị a enweghị ike ịsọ mpi na ụdị ndị ọzọ ma ọ bụ kwaga ebe siri ike karị. Mgbe ụdị ndị a nwụrụ, ndị ọzọ nọchiri ha bụ ndị bilitere n'ihi mgbanwe ọhụrụ maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi n'oge ọ bụla n'akụkọ ihe mere eme.
Site na akwụkwọ ozi ndị a, ọrụ Charles Lyell nwere ihe ịga nke ọma n'ụwa niile. Ọ bụ ihe mmụọ nsọ nye ọtụtụ ndị sayensị, gụnyere Charles Darwin.
Lyell si n'ike mmụọ nsọ na nka ihe omuma a bu nke onye oka mmuta James Hutton. Ọ gụrụ banyere mbido ụwa na Theory nke ụwa nke Hutton mepụtara ụfọdụ nchepụta banyere mbara ụwa na ike ọ gara n’ihu. N'oge ahụ, e chere na catastrophism dakọtara na echiche nke okike ofwa na nkọwa Akwụkwọ Nsọ ya.
E weere Lyell dịka otu n'ime ndị bidoro stratigraphy, nke ha nwere ike ịmalite ịmụ ihe dị iche iche nke elu ụwa. Ọ bụ otu n'ime ndị mbụ dere akwụkwọ nkewa site ụfọdụ ọmụmụ nke mmiri strata rụrụ ke Western Europe. Na strata a, ọ na-amụ mollusks na shells wee nwee ike kewaa ndị dị iche iche ụdị nkume na oge atọ: Eocene, Miocene na Pliocene.
Ebube na njem nke Charles Lyell
N'afọ 1827 bụ mgbe ọ nwere ike ịhapụ ahịa ọ ga - enwe ike ịrara onwe ya nye geology. Ọ bụ onye otu Royal Society, nke ọ ga - emeziwanye ọmụmụ ihe ya. Agbanyeghị na James Hutton bipụtara na mbụ na ụwa malitere site na nwayọ nwayọ mana ọ bụghị mgbanwe mberede dịka nchekwa nke catastrophism na-agbachitere, ọ bụ Lyell bụ onye nyere nkọwa nkọwa doro anya n'oge ahụ.
N'afọ ndị ikpeazụ nke ndụ ya, ọ bipụtara ọrụ nke ga-aghọ ihe akaebe na ngalaba mmụta ala na stratigraphy. Ọ bụ ihe gbasara Ihe omumu banyere ala na 1863, o bipụtara akwụkwọ nke atọ ya akpọrọ Oge ochie nke mmadụ. Akpọrọ ya aha Sir ma nata ọtụtụ nkwanye ugwu na ndụ ya niile. Ọ nwụrụ na February 22, 1875.
Enwere m olileanya na ozi a enyerela gị aka izute otu n'ime ndị nna ntọala nke geology nke oge a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Charles Lyell